Ngaphandle. U-Erica kwi-villa enomtsalane 2mn uhamba ukusuka elunxwemeni
Arenal d’en Castell, Illes Balears, Spain
Indlu yase-Erica ibekwe kumgangatho wokuqala wendlu entle yaseLos Albatros, ejongene nolwandle. Umthamo wabantu aba-4, igumbi lokulala eliphindwe kabini elinebhedi eyi-1.50 kunye nelinye elinebhedi enebhedi ezimbini. Amathafa amabini aneembono ezintle zolwandle, ikhitshi, igumbi lokuhlambela elineshawa, umatshini wokuhlamba, igumbi lokuhlala, iTV yesathelayithi, ukhuseleko eludongeni, i-wi-fi. Amashiti kunye neetawuli zibandakanyiwe. Ukufikelela ngokuzimeleyo.
Indlu yimizuzu emibini yokuhamba ukusuka elunxwemeni, ilungele usapho olunabantwana okanye isibini.
I-chalet yindlu ejongene nolwandle, kwindawo encinci ye-de-sac. IArenal d'en Castell yenye yeelwandle ezintle kakhulu kwesi siqithi, kwaye amanzi ayo acwengile. Elunxwemeni ungaqesha iiambrela kunye nezitulo zedeck, ii-pedal boats kunye ne-kayaks.
Indawo izolile kakhulu. Kukho iindawo zokutyela ezininzi elunxwemeni kwaye kufutshane, kukho iivenkile ezininzi ezincinci, ikhemesti; imidlalo kunye nezinto ezinomtsalane kubantwana, ipaki yamanzi. Ilali entle yokuloba iMacaret ikumgama weekhilomitha ezi-1, i-Addaya nautical port iikhilomitha ezi-4 apho unokuqesha khona zonke iintlobo zezikhephe kunye nalapho kukho iklabhu yokuntywila. Indawo yegalufa iSon Parc ikumgama oziikhilomitha ezi-6. Iiarhente ezininzi zokurenta iimoto zikwindawo ekufutshane. Isikhululo seenqwelomoya yimizuzu engama-20/25 ngemoto.
Umnini-hostela uya kwamkela iindwendwe, kwaye uya kuhlala ekhona endlwini kwaye efumaneka ukuze ancede kwaye acebise ukwenzela ukuba ukuhlala kube mnandi ngokusemandleni. Umninimzi uthetha iSpanish, isiTaliyane, isiFrentshi, isiNgesi kunye nesiSwedish.
Umnini-hostela uya kwamkela iindwendwe, kwaye uya kuhlala ekhona endlwini kwaye efumaneka ukuze ancede kwaye acebise ukwenzela ukuba ukuhlala kube mnandi ngokusemandleni. Umninimzi…
Inombolo yomthetho: ET1773ME
Iilwimi: English, Français, Italiano, Español, Svenska
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R3607
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Arenal d’en Castell